तिब्बती नेतृत्वले एक प्रायोजकसँग कस्तो व्यवहार गर्दछ? (जिन्दक) | Tsem Rinpoche
By Pastor Elena Khong Jean Ai | Dec 17, 2017 | Views: 248
म त्यहाँ भएको पहिलो बिहान, लामा छोपा गर्दै गादेन शार्त्से गुम्बाका सबै भिक्षुहरू। हामीले भिक्षुहरूका लागि प्रसादको व्यवस्था मिलाएका थियौँ।
धर्ममा प्रायोजन व्यवस्थाका बारेमा कुरा गर्न अधिकांश मानिसहरु असहज मान्छन्। उनीहरु सोच्छन् कि पैसाका बारे छलफल गर्नु आध्यात्मिक विषय होइन। यद्यपि यो एक अपरिहार्य विषय हो किनभने प्रायोजकको उदारता र कोष (धन) बिना गुम्बा र धार्मिक संस्थाहरूको संचालन गर्न सकिँदैन। यो सांसारिक जीवनको साधारण वास्तविकता हो। वास्तवमा, बुद्धकै समयमा पनि प्रायोजनको विषयलाई सम्बोधन गरिएको थियो। मगधा साङ्मो र उनका बाबु सुद्दत्तजस्ता चेलाहरूको उदाहरणले एक प्रायोजकको सही मनोवृति कस्तो हुनु पर्छ र प्रायोजन कसरी आध्यात्मिक अभ्यास हुन सक्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ। प्रायोजनलाई प्राप्तकर्ताको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ र म यहाँ त्यसै सन्दर्भमा धर्मशाला र तिब्बती नेतृत्वले उनीहरुका प्रायोजकहरुसँग गर्ने नराम्रो व्यवहारको विषयलाई सम्बोधन गर्दैछु।
बौद्ध धर्मको अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीहरूले कुनै न कुनै समयमा प्रायोजनको विषयका बारेमा सोच्नै पर्छ। मलाई ११ वर्षको उमेरदेखि प्रायोजनको बारेमा थाहा थियो जब मैले मेरो परिवारको मार्फत धर्मको परिचय पाएँ। गत १९ वर्षदेखि हामीले केचारा लगायत भारतका गुम्बाहरुको प्रायोजन गर्दै आइरहेका छौँ।
बाँयापट्टी, चश्मा लगाएको र क्यामेरामा हेर्दै म। म सानो हुँदा, हामी सबै (रिन्पोछे र मेरो परिवार) सँग निकै थोरै व्यक्तिगत धन थियो। हामीसँग धर्म केन्द्र बनाउन चाहिने पैसा नभएका कारण रिन्पोछेले घर-घर गएर धर्म शिक्षा दिनुहुन्थ्यो। त्यसरी उठाइएको रकमको केही भाग सधैं गुम्बाहरुले गर्ने जस्तो सुकै अनुरोधका लागि दिइन्थ्यो। आज हामीले त्यत्रो पैसा उठाएर प्रायोजन गरेका गुम्बाहरुमा हामीलाई जान निषेध गरिएको छ।
मलाई मेरो बाल्यकाल र युवा अवस्थाभरि भारतका गुम्बाहरुका लागि रकम जुटाउन अनगिंती भोज र कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको याद छ। सन् १९९७ को आर्थिक मन्दीको मारमा पर्दा पनि हामीले कहिले गुम्बाहरुको प्रायोजन गर्न छोडेनौँ। हामीलाई कहिले कुन भिक्षुको औषधी र कहिले किताब र लुगाका लागि सहयोगको अनुरोध गर्दै थुप्रै एस.एम.एसहरु पठाइन्थ्यो। गाई-भैसीँ लगायत भवन निर्माण सामाग्रीको प्रायोजन र स्वास्थ्य सामाग्रीका लागि रकम संकलनका अनुरोधहरु आउथे। मूर्ति लगायत चित्रकारी र गुम्बाका मूर्तिहरूको लागि आभूषण दान गर्ने थुप्रै अवसरका प्रस्तावहरू पनि आएका थिए।
प्राय मलाई रिन्पोछे र गुम्बाबाट हाम्रो प्रायोजनको सदुपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने बारे बारम्बार आउने अद्यावधिकहरु याद छन्। तपाईंले प्रायोजन गर्नु भएको गाई यो हो, तपाईंले दान गर्नु भएको रकमले रंग लगाइएको कोठा यो हो, भिक्षुहरूलाई दान दिइएका लुगाहरु र, बनाउँदै गरिएका र रंग लगाउँदै गरिएका मूर्तिहरु यी हुन्। गादेन लाछी (मुख्य प्रार्थना कक्ष) को खनिँदै गरिएको पुरानो भुइँ यो हो, छानिएको नयाँ भुइँ यस्तो देखिन्छ र सो कामका लागि नियुक्त गरिएका ठेकेदारहरू यी हुन्…यस्तै यस्तै।
उत्तरी भारतको धर्मशालामा अवस्थित गादेन शार्त्से साब्तेन खाङ्ग (पुजा घर) का लागि दान रकम उठाउँदै। मितिलाई ध्यान दिनुहोस्, यो दोर्जे शुग्देनको प्रतिबन्ध चरम बिन्दुमा पुग्नु भन्दा दुई वर्ष अघिको कुरा हो। के उठेको रकम प्रायोजकलाई फिर्ता हुन्छ त? मेरो विचारमा हुँदैन…
यतिका वर्ष भरि, रिन्पोछेसँग मिलेर हामीले भारतका तिब्बती गुम्बाहरुलाई लाखौँ रूपैयाँको दान दिएको कुरा म विश्वासका साथ भन्न सक्छु। तपाईंले सोचिरहनु भएको होला किन म यतिका वर्ष पछि यसका बारेमा लेख्दै छु। एक जिन्दक भएको हिसाबले, म यो दोर्जे शुग्देन विवाद भइँरहदा धर्मशालाले नेतृत्व लिएको शुग्देन विरोधी गुटले म लगायत मेरा लामा र मेरो परिवारसँग कस्तो व्यवहार गरेको छ भन्ने कुरा बताउन चाहन्छु।
विगत १९ वर्ष देखि म र मेरो परिवार तिब्बती गुम्बाहरूका जिन्दक हुँदै आएका छौँ। हामीले दुवै व्यक्तिगत रूपमा र रिन्पोछेको माध्यमबाट केचारा संस्थामार्फत गरिएका कुनै पनि रकम संकलनका प्रयासहरुमा सहयोग गर्ने गर्थ्यौँ। हामीलाई ती गुम्बाहरुलाई साँच्चै नै सहयोगको आवश्यकता भएको जस्तो लाग्थ्यो र हामीलाई त्रिरत्न मध्ये कुनै एकलाई दान गर्नु निकै प्रशंसनीय काम हो भन्ने सिकाइएको थियो (र हामी त्यसमा अझै विश्वाश गर्छौँ)।
गादेन शार्त्से गुम्बाका सबै भिक्षुहरूलाई दान दिँदै। मेरा लामा, मेरो परिवार र मैले पछिल्लो २० वर्षदेखि यो गर्दै आइरहेका छौँ। दुर्भाग्यवश, हामीले दोर्जे शुग्देनलाई मान्ने हुनाले, हामीलाई ती गुम्बाहरुमा जान निषेध गरिएको छ र संघ समुदायका लागि लाखौँ रकम दान दिएता पनि, हामीसँग नराम्रो व्यवहार हुँदै आइरहेको छ।
व्यक्तिगत हिसाबमा, मैले आर्थिक रुपमा मात्र जिन्दकको भूमिका खेलेकी छैन। मैले मेरो समय र मेहेनत पनि लगानी गरेकी छु। म तिब्बती समुदायसँग अपरिचित छु भन्न गलत हुन्छ। साच्चिकै भन्नुपर्दा, भारत कहिले पनि मैले यात्रा गर्न रूचाएको ठाउँ थिएनँ। एक निजी बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालयमा पढेकी हुदाँ, म पश्चिमेली धारणासँगै हुर्किएँ। तर सन् २००४ मा रिन्पोछेले मलाई पहिलो पटक भारत यात्रा गर्न आग्रह गर्नुभयो। त्यो र त्यसपछिका यात्राहरूले मेरो सम्पूर्ण संसारलाई परिवर्तन गरिदियो।
म भारतमा अन्तिम पटक सन् २००५ को प्रारम्भमा थिएँ, प्रतिबन्ध चरम बिन्दुमा पुग्नु भन्दा तीन वर्ष अघि। त्यति बेला, गादेन शार्त्से गुम्बा एउटै थियो र दुई भागमा विभाजित भइसकेको थिएन। त्यो समय तुलनात्मक हिसाबले शान्त भएकाले मैले सेरा मे गुम्बा, जोङ्ग्कार छोईदे गुम्बा र ग्युमेद तान्त्रिक महाविद्यालय भ्रमण गर्न पाएकी थिएँ। मैले दोर्जे शुग्देनलाई मान्ने हुनाले ती सबै ठाउँहरू अब मेरो पहुँचबाट बाहिर छन्।
प्रतिबन्ध चरम सीमामा पुग्नु र गुम्बाहरू विभाजित हुन बाध्य हुनु अघि सन् २००४/२००५ को हिउँदमा मैले गादेन शार्त्से गुम्बा घुम्ने ठुलो अवसर पाएकी थिएँ।
मैले गरेका यात्राहरूमध्ये यो सन् २००५ को तीर्थयात्राले मेरो बौद्ध धर्मप्रतिको विश्वासलाई अझ प्रगाढ बनायो। एक पछि अर्को गुम्बाहरुको भ्रमण गर्दा मैले म भित्र केही परिवर्तन आएको र ती राता कपडाहरुको माझ सजिलो महसुस गरेँ। यस कारण मैले त्यस यात्रामा आफु भिक्षुणी बन्न आग्रह गरे।
मैले तिब्बती संस्कृतिका थुप्रै सुक्ष्म पक्षहरुका बारेमा नजाने पनि समग्र तिब्बतको बारेमा सधैं इच्छुक रहँदै आएकी छु। यस बारे आजकल धेरै कुरा नगरे पनि मैले बेलायतमा बस्दा धेरै वर्षसम्म तिब्बती आन्दोलनको अभियान चलाएको कुरा म नजिकका सबैलाई थाहा छ। त्यसो नगर्न सल्लाह पाए पनि एक तिब्बती बौद्ध धर्मावलम्बी भएको नाताले तिब्बती जनताका लागि बोल्नु आफ्नो कर्तव्य सम्झेर म लुकिछिपी विरोधमा जान्थेँ।
आजकल म मैले अभियानकर्ता भएर काम गरेको समयका बारेमा कुरा गर्दिन किनभने मलाई दु:ख लाग्छ। एकतर्फ, म तिब्बती जनताहरूप्रति भइरहेको अन्यायको दृढतापूर्वक विरूद्ध छु। अर्कोतर्फ, स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, दोर्जे शुग्देनलाई मान्ने हुनाले मसँग दोर्जे शुग्देन विरोधी तिब्बती समुदायले रद्दी सरह व्यवहार गर्छ।
तिब्बतीहरु बीच वी च्याटमा रिन्पोछे र मलाई कस्तो व्यवहार गरिन्छ भन्ने थुप्रै उदाहरणहरुमध्ये एक। मानिसहरू मेरो सामाजिक सञ्जालका खाताहरुमा रहेका उपसम्पदा अघिका पुराना फोटोहरुको कोलाज बनाएर चरित्र हत्या गर्न खोज्छन्। के तिब्बती नेतृत्वले आफ्नो समुदायलाई प्रायोजकहरूसित यस्तै व्यवहार गर्न प्रेरित गर्छ?
मैले मेरो आस्थाका कारण अन्लाईन अपमानित र उत्पीडित भइरहनु परेको छ। यहाँ सम्म कि तिब्बती समुदायका साथीहरुले मेरो आस्थाका कारण मबाट टाढिने बताएका छन्। उनीहरु भन्छन् मेरा लामा ठग हुन् र मलाई मुर्ख बनाइरहेका छन्। मेरा तस्विरहरुलाई फोटोशप गरि म र मेरो गुरु बीचको सम्बन्धमा प्रश्न चिन्ह उठाइएको छ। मलाई अपमानित गर्ने, नानाथरी नाम बोलाएर मेरा धारणालाई बकवास ठहराउने प्रयासहरु भएका छन्। म जब वी च्याटमा पोष्ट गर्छु, मेरा लामा र मेरो आस्थाको निन्दा गर्न मलाई विष्ठा, मैथुन, बन्दुक, चुप्पीहरू र अन्य त्यस्तै अपमानजनक तस्विरहरु पठाइन्छन्।
कतै मैले आवाज उठाएको तिब्बती समुदायको वास्तविक स्वभाव यो नै हो कि भन्ने कुराले मलाई चिन्तित पार्छ। के मैले वर्षौँ सम्म त्यस्तो समुदायको अधिकारका लागि लडेँ जसले आफ्नै समर्थकहरुसँग विश्वासघात गर्छ? जब शुग्देन विरोधी तिब्बतीहरूले आफ्नो आस्थाका नाममा आफ्नै समुदायका मान्छेहरु माथि आक्रमण गरिरहेका छन्, मैले शायद म एक विदेशी माथि यस्तो भएकोमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन।
के मैले वर्षौँसम्म गरेको उनीहरुको समर्थनको अब केही अर्थ रहेन? के मैले तिब्बती गुम्बाहरुका लागि संकलन गरेका लाखौं रूपैयाँको अब उनीहरुलाई मतलब छैन? के तिब्बती नेतृत्वले आफ्नो समुदायलाई आफ्नो जिन्दकसँग यस्तै व्यवहार गर्न प्रेरित गर्छ? यदि अब म दोर्जे शुग्देनलाई मान्ने बेइमान हुँ र मैले सहयोग पुर्याएका गुम्बाहरुमा म स्वागत छैन भने के मैले सहयोग गरेको रकम म र मेरा प्रियजनहरूलाई फिर्ता आउँछ? म खराब भए मेरो पैसा पनि पक्कै खराब होला। दाता नै खराब भएपछि उसको पैसा चाँही कसरी सफा हुन्छ? यस्तो अनुभव भोग्ने म मात्र छैन। हृदयस्पर्शी रूपमा, घेशे सोपा-लाले एक पटक मलाई उहाँको आस्थाका कारण उहाँ आफैंले बनाउन मद्दत गर्नुभएको गुम्बामा पाईला टेक्न पनि नदिएको कुरा बताउनु भएको थियो र उहाँका ती शब्दहरूले मलाई कहिले सताउन छाडेनन्।
वास्तवमा, गुम्बाहरुका लागि आफ्नो जीवन समर्पित गरे पनि नराम्रो व्यवहार खप्नु परेको घेशे सोपाले मात्र होइन। अनगिंती थुप्रै अरू लामा र शुग्देन अभ्यासकर्ताहरूलाई उनीहरुले सयौँ, हजारौंँ देखि लाखौँ रकम दान गरेका गुम्बाहरुसँग सम्पर्कमा बस्न दिइएको छैन। उदाहरणका लागि, दोर्जे शुग्देनमाथि प्रतिबन्ध लगाइनु अघि गाङ्ग्छेन रिन्पोछे सेरा-मे गुम्बाका ठूला उपकारकहरु मध्ये एक थिए। साङ्ग्पा खाङछेनका भवन, प्रार्थना कक्ष र भिक्षुहरूका कोठाहरू उहाँले जुटाउनु भएको पैसाले बनाइएको हो। प्रतिबन्ध पछि, तिब्बती नेतृत्वले गाङ्ग्छेन रिन्पोछेलाई व्यवस्थित रूपमा अपमान गर्दै उहाँको निन्दाका लागि एउटा पेज नै बनाएको थियो।
अर्का शुग्देन लामा, केन्सुर लोब्साङ्ग थार्चिनले सेरा-मेका भिक्षुहरूका लागि एक व्यापक सफल खाद्यान्न कोषको स्थापना गरे। यो कोषले भिक्षुहरूका लागि खाद्यन्नको व्यवस्था मिलाउने चुनौतीलाई स्थायीरूपमा सामाधान गर्यो र त्यसले आजका दिन सम्ममा पनि गुम्बालाई मद्दत भईरहेको छ। यदि केन्सुर रिन्पोछे आज जिवित हुनु भएको भए के तिब्बती नेतृत्वले उहाँलाई पनि त्यसरी नै अपमान र भेदभाव गर्थ्यो? आखिर उहाँले जिवित रहनुन्जेल कहिले पनि दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्न छाड्नुभएन।
मेरो परिवारले झन्डै २० वर्षदेखि गादेन गुम्बाका भिक्षुहरूलाई सहायता पुर्याउँदै आएको छ। यहाँ गादेन शार्त्से र गादेन जाङ्गसे महाविद्यालयका भिक्षुहरूसँग देखिएका मेरा काकीहरु, काका, हजरबुबा र केही साथीहरू हुन्।
अहिले मलाई लाग्छ मेरो परिवार र मैले तिब्बती समुदायको लगभग दुई दशकसम्म समर्थन गरेता पनि हामीसँग गरिएको नराम्रो व्यवहारका कारण मैले तिब्बती नेतृत्वको समर्थन गर्न छोड्नु उचित निर्णय थियो। तपाईंले कति सहयोग गर्नुभयो र कति पटक गर्नुभयो त्यसको मतलबै छैन। तपाईंले तिब्बती नेतृत्वको आर्थिक आवश्यकताहरु पुरा गरिसकेपछि धर्मशालाको प्रशासनका लागि तपाईंको उपयोगीता सक्कियो। हाम्रो प्रायोजन चाँही स्विकार गर्ने तर हामीलाई बहिष्कार गरेको हुँदा हामी यो सोच्न बाध्य भएका छौँ।
तर धन्य, यसले म र म जस्ता अरु अभ्यासकर्ताहरूलाई आफ्नो उर्जा र धन दोर्जे शुग्देनको अभ्यास र इतिहासलाई फैलाउनमा लगानी गर्न प्रोत्साहन दिएको छ। यसको मतलब हामी गैर शुग्देन गुम्बाहरुको प्रायोजन विरुद्द भएको होइन। बरु हामी खुशीका साथ सहयोग गर्न तयार छौँ यदि तिब्बती नेतृत्वले आफ्ना जनताले जिन्दकसँग गर्ने नराम्रो व्यवहारलाई रोक्ने हो भने। मलाई बहिष्कार गर्ने र मेरो अपमान गरेर मलाई सकेसम्म दमन गर्न खोज्ने समुदायको समर्थनमा मैले किन रकम जुटाउने? उनीहरुका लागि म किन बोल्ने? जुन समुदायले मेरा साथीहरूलाई होटेलबाट बहिष्कार गर्छ, उनीहरुले गुम्बाहरुका लागि लाखौं रुपैयाँ जुटाएको भए पनि उनीहरुले मोती किन्न चाहँदा उनीहरुलाई बेच्न मान्दैन, त्यस समुदायको समर्थन किन गर्ने? त्यस्तो समुदायको समर्थन किन गर्ने जसको नेतृत्वले शुग्देन अभ्यासकर्ताहरूको निन्दा गर्ने र उनीहरुलाई खराब भनेर वर्गिकरण गर्ने अनुमति दिइरहेको छ?
गादेन शार्त्से गुम्बाको संरक्षणघरको कोषका लागि रकम उठाउँदै। गत २० वर्षमा गरिएका थुप्रै रकम संकलन कार्यक्रमहरु मध्ये यो एक थियो र यसको लक्ष ११.१ लाख रुपैयाँ उठाउँने थियो।
विडम्बना यो हो कि मैले केवल मेरा तिब्बती समुदायका गुरुहरुले सिकाएको आस्थाको अभ्यास गरिरहेकी छु। यो पछिल्लो ४०० वर्षदेखि एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै आएको अभ्यास हो। म तिब्बती होइन र मैले यस्तो व्यवहार सहि राख्नु पर्दैन। मैले जुन तिब्बती नेतृत्वको समर्थनमा विरोध गर्थेँ, त्यही नेतृत्वले आज मसँग यस्तो व्यवहार गरिरहेकाले म मेरो आस्था, पैसा र उर्जालाई लगेर अरु ठाउँमा लगानी गर्छु।
धन्य मेरा लामाका कारण मलाई थाहा छ कि भारतका गुम्बाहरुमा अझै थुप्रै अतुल्य धार्मिक स्थल र अभ्यासकर्ताहरू छन्र र मैले तिनीहरूमा विश्वास गर्न छाडेकी छैन। तर त्यहाँ धार्मिक स्थल र व्यक्तिहरु भएता पनि, तिनीहरूको नेतृत्वले विगत २० वर्ष देखि केही अनैतिक कामहरुलाई प्रेरित गरिरहेको कुरा बिर्सन सक्किन र यो रोकिनै पर्छ।
यस रकम संकलन कार्यक्रममा रिन्पोछे र उनका विद्यार्थीहरूले गुम्बाको अस्पतालका लागि २९०,००० रिङ्ङीट (४३.६ लाख भारू) उठाएका थिए। तिब्बती नेतृत्वले उनीहरूको समुदायलाई गरेको यस्तो सहायताको कदर नगरेर आफ्ना जनतालाई शुग्देन अभ्यासकर्ता र प्रायोजकहरूको निन्दा गर्न प्रेरित गर्छ। शुग्देन अभ्यासकर्ता भएका कारण रिन्पोछे र उनका विद्यार्थीहरूले आफैले रकम उठाएर बनाएको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउँदैनन्।
दोर्जे शुग्देनको प्रतिबन्ध चरम बिन्दुमा पुग्नु अघि, गादेन शार्त्से गुम्बाका एक बुढा भिक्षुको उपचारका लागि सहयोगको अपिल। इमेलमा भएको नाम हेर्नुहोस्, त्यो वर्षौ देखि लाखौं रुपैयाँ उठाउन मद्दत गर्ने मेरी आमाको हो।
केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनमा कार्यरत यशि छोडोनले हालचालै मेरो सामाजिक संजालमा यस्तो लेखिन्। के तिब्बती नेतृत्वले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई प्रायोजकसँग यस्तो व्यवहार गर्न प्रेरित गर्छ?
रिन्पोछेलाई भेट चढाउँदै मेरी हजुरआमा र काकी (अहिले पादरी प्याट्सी)। यस्ता सार्वजनिक पाठहरु हुँदा संकलन गरिएका रकमको केही भाग सधैं गुम्बाहरुलाई दान गरिन्छ।
हामी आफैसँग थोरै हुँदा पनि गुम्बाहरुका लागि अत्यावश्यक रकम संकलन गर्न आयोजना गरिएका थुप्रै कार्यक्रमहरु मध्ये एक। यो कार्यक्रम यति पहिले आयोजना गरिएको थियो कि रिन्पोछेका अहिलेका विद्यार्थीहरूले यो रेस्टुरेन्ट चिन्दा पनि चिन्दैनन्।
लुगा र मञ्जुश्रीको मूर्ति दान स्वरूप लिँदै गादेन गुम्बाका युवा भिक्षुहरू। मेरा लामा, मेरो परिवार र केचाराले गादेन गुम्बाका भिक्षुहरूलाई ३००० लुगा र मूर्तिहरू प्रदान गर्‍यो। दोर्जे शुग्देनलाई मान्ने हुनाले, हामी जस्ता प्रायोजकहरुसँग अपराधी सरह व्यवहार गरिन्छ।
बोधगयाको रूट संस्थामा रिन्पोछेसँग लामा चोङाख्पा र छोराहरूको मूर्ति सेट दान गर्दै। हामीले दान गरेका मूर्तिहरू अझै पनि त्यहाँको मूल वेदीमा राखिएका छन् तर त्यहाँ हामीलाई जान भने निषेध गरिएको छ।
एक शुग्देन विरोधीले मलाई वि.च्याटमा सार्वजनिक रूपमा पठाइएको सन्देश। तिब्बती नेतृत्वको मौनताले उनीहरूले आफ्ना प्रायोजकप्रति यस्तो व्यवहार गर्न अनुमति दिइराखेको छ।
मैले तिब्बती आन्दोलनका लागि काम गर्दा भेटेको एक साथीले लेखेको विनम्र कमेन्ट। दु:ख लाग्दो कुरा के हो भने उसले मलाई मेरो संस्था छोड्न भन्यो र मेरा लामालाई बेइमान भएको आरोप लगायो। के यी गुम्बा र शुग्देन विरोधीहरुले हामीलाई भूतको उपासक भएको आरोप लगाउँदै फेरि त्यही भूतको उपासकहरुले उठाएको रकम लिनु इमान्दार हो त?
मेरो सामाजिक संजालमा हालसालै लेखिएको एक अभद्र कमेन्ट। यदि म आतकंकारीहरु द्वारा प्रायोजित हुँ भने के मैले र मेरो परिवारले गुम्बाहरुका लागि उठाएको रकम अस्वीकार्य भएन? अनि के त्यो रकम हामीलाई फिर्ता आउँछ त?
आफू तिब्बती नेतृत्वसँग नजिक भएको बताउने एक जनाले मेरो सामाजिक संजालमा लेखेको कमेन्ट। उनले यो लेखेर एकछिनमै हटाइ हालिन्। शायद उनी चाहन्थिन् मैले पढुँ तर अरूले शुग्देन विरोधीहरु कस्ता छन् भन्ने थाहा नपाउँन्।
तिब्बती समुदायका अर्का सदस्यद्वारा थप गाली। किन होला तिब्बती नेतृत्व मौन रहँदा शुग्देन विरोधीहरुलाई प्रायोजकहरूसँग यस्तो निकृष्ट बोली बोल्न उचित लाग्ने?
तिब्बती समुदायका अर्का सदस्यसदस्यले हैरान गरेको।
सामाजिक संजालमा युवा क्याब्जे त्रिजंग रिन्पोछेले युवा क्याब्जे सोङ्ग छोक्त्रुल रिन्पोछेसँग खाजा खाइरहेको फोटो पोष्ट गरेपछि, मैले यस्तो प्रतिकृया पाएँ। के तिब्बती नेतृत्वले आफ्ना जनतालाई लामाहरूको बारे यस्तै लेख्न प्रेरित गर्छ?
निःशुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्।
दोर्जे शुग्देनको चित्रकथा।
यो चित्रकथा नेपाली भाषामा छ जहाँ भगवान दोर्जे शुग्देन हाम्रो समयको सर्वोच्च विश्व शान्ति रक्षकको रूपमा कसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ भन्ने बारे उहाँको आकर्षक कथा व्याख्या गरिएको छ। जब हामीले उहाँको कथा राम्ररी बुझ्छौँ, तब यस शक्तिशाली संरक्षक देवताबाट हामीले अधिक आशिष प्राप्त गर्नका साथै उहाँको महानताको कदर गर्न सक्छौँ।
डाउनलोड गरिएको फाइल खोल्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। (पीडीएफ फाईल):
दोर्जे शुग्देन: हाम्रा व्यक्तिगत कथाहरू »
12 Responses to तिब्बती नेतृत्वले एक प्रायोजकसँग कस्तो व्यवहार गर्दछ? (जिन्दक)
Joy Kam on Dec 10, 2018 at 6:09 am
Tsem Rinpoche on Nov 26, 2018 at 1:37 pm
Tsem Rinpoche on Nov 23, 2018 at 6:15 am
Pastor Adeline Woon on Sep 20, 2018 at 5:44 am
Beatrix Ooi on Aug 10, 2018 at 6:36 am
Valentina Suhendra on Aug 7, 2018 at 8:32 pm
Pastor Shin Tan on Aug 1, 2018 at 11:27 pm
Made in Japan on Jul 31, 2018 at 5:10 am
Pastor Adeline Woon on Jul 29, 2018 at 6:07 pm
Pastor Adeline Woon on Jul 25, 2018 at 6:21 am
Joy Kam on Jul 22, 2018 at 7:30 pm